Semalt - Indlela yokuLahla i-Bot Traffic kwi-Google Analytics yakho
Akuyi kuphazamiseka ukuthetha ukuba idata lilitye lembombo kuzo zonke i-intanethi yezoshishino kunye nezokuthengisa. Kubalulekile kuthi sihlakulele ukuqonda kwedatha yethu kwaye siqinisekise ukuba kufikelele kwiimpawu zokuthengisa zangoku. Sifanele sivavanye indlela yokuziphatha yabasebenzisi kwiwebhusayithi yethu kwaye sazi yonke into malunga nezoshishino - flowers online thessaloniki. Oku kuyenzeka xa singabandakanyi i-traffic bot kwiGoogle Analytics kwaye sigxininise ekufumaneni iziphumo ezifunwayo.
UAlexandre Peresunko, uMphathi weNtengo kaMthengi we-10 (Semalt , uvula iimfihlo zentengiso kulo mbandela.
Ukuze uqokelele idatha, kufuneka usebenzise iindlela ezahlukeneyo zokuhlalutya kunye nokujonga. Nangona kunjalo, i-Google Analytics iyona ithuluzi elichanekileyo nelisetyenziswa ngokubanzi. Oku kukuvumela ukuba ufumane ukufaneleka kwedatha yakho kwaye ubonise iziphumo ezichanekileyo. Iibhsayithi ezingaphezu kweebhiliyoni ezimbini zisebenzisa i-Google Analytics ukuvavanya nokuhlaziya umgangatho wokutyelela kwabo. I-Bot traffic iyinto enokulimaza iwebhusayithi yakho kwaye ingenza uzive uhlupheka kwi-intanethi. Ekugqibeleni kukhokelela kwizigqibo eziphosakeleyo, ukuvavanya kunye nokucinga, oko kukuchaphazela ukusebenza kwendawo kunye nokuthembeka.
Akufanele sikhohlwe ukuba kuzo zonke izitshixo zomntu kukho i-bot hits kwi-server. Ngoko ke, ukhuselekile ukutsho ukuba i-bots sele ibalulekile kwaye kufuneka icandelo leyiphi na iwebhusayithi. iintlobo zebhodi: i-bots ehle kunye neendawo ezimbi.
Ii-Bot ezilungileyo ziziphethe kakuhle kwaye ziyakuthandeka kwiwebhusayithi yakho, ngelixa iindawo ezimbi ziyiyo ezidalwe ngabaculi nabahlaseli kwaye zihlose ukukhenkcela kwaye zibonise iwebhusayithi yakho ngokungemthetho. Ingxelo ibonisa ukuba ngaphezu kwepesenti ezingamashumi amabini ezithuthi zonke ezithunyelwa ngebhodi ezilungileyo zifunyanwa yiboti enobungozi neyingozi. Ngoko sinokuthi i-bots ayikwazi ukufumana indawo yokunceda nayiphi na indleko kwaye kufuneka ilahlekelwe ngokukhawuleza.
Ezinye iindidi ezimbini zebhodi ziyihosthost kunye ne-zombie bots. I-Ghosts bots zizodwa ezingabonakali kwiwebhusayithi yakho kodwa zibonisa iimiphumo ezifanayo, ngelixa i-zombie bots ziza kukunika iwebhusayithi yakho. Bavelisa iingxelo kwiGoogle Analytics kwaye bazenze babe ngabanyani. Bafaka iikhowudi zabo ezithile kwi-data yakho ye-analytics kwaye bazame ukulimaza ngendlela enye okanye enye.
Indlela yokukhupha i-Bot Traffic
I-Google isandul 'isandul' ukuba kukho izixazululo ezininzi zokucoca i-bots ezilungileyo, i-bots ezimbi kunye nokuthunyelwa kogaxekile kuGoogle Analytics. Ngenxa yale njongo, kufuneka ubeke imbonakalo engabonakaliyo kwaye ufunde imithombo yesithuthi sakho. Kufuneka ukwazi amaqhinga okuhlukanisa phakathi kwebhodi efanelekileyo kunye neendawo ezimbi. Unokuzivumelanisa neendlela ezininzi zokuthengisa ukwenzela ukuba wandise amathuba okufumana imibono ekhethekileyo kwiwebhusayithi yakho. Kwakhona kunenzuzo xa wenza izihlunu ezahlukeneyo kwimithombo yomzila yangaphakathi nangaphandle. Unokubamba ii-IP ezininzi ezikhangelekisayo kwaye azibandakani nenyani. Xa kwenzeka i-zombie bots, kufuneka uyihluze ngokubona indawo kunye nezinyawo. Kule nto, uya kufuneka ukwazi yonke into malunga nomthombo wabo kwaye uqhubeke nenqanaba lokudala inyawo.